Inona ny 'system' ao amin'ny fitehirizana Mac? Ity ny marina sy ny fomba fanesorana azy! - Hafa
iphone mikatona miaraka amin'ny bateria feno
iPhone dia tsy hivadika rehefa simba ny rano
itunes mangataka fisoratana anarana hatrany
aiza ny bokotra an-trano amin'ny iphone 6-ko
mampifandray iphone amin'ny mpanonta tambajotra
Inona ny 'system' ao amin'ny fitehirizana Mac? Ity ny marina sy ny fomba fanesorana azy!
Tsy manana toerana fitehirizana intsony ianao ary tsy hitanao izay hatao. Voamarikao ve izany RAFITRA mila toerana fitahirizana be dia be izany ary tsy azonao antoka ny antony. Ao amin'ity lahatsoratra ity, ianao Hanazava ny atao hoe 'System' ao amin'ny fitehirizana Mac aho ary hasehoko anao ny fanesorana azy .
Rafitra amin'ny Mac Storage: Nanazava
Ny 'System' ao amin'ny fitehirizana Mac dia misy backups ary fisie cache matetika. Natao hitehirizana rakitra vetivety amin'ny Mac-nao. Manomboka mameno haingana ny toerana fitahirizam-bokatra Mac anao rehefa mitahiry rakitra vetivety izy io.
Ny Mac dia mamafa avy hatrany ny rakitra sasany. Na izany aza, ny rakitra hafa tsy misy ilana azy dia tsy esorina foana, izay mitana ampahany lehibe amin'ny rafitra amin'ny tahiry Mac.
Ahoana ny fomba hanesorana ny habaka nobodoan'ny rafitra amin'ny Mac Storage
Voalohany, tsindrio ny kisary Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery. Kitiho avy eo Momba an'ity Mac ity -> Storage . Eto no hahitanao izay tena maka habaka amin'ny Mac anao. Araka ny hitanao dia mitaky fitehirizana 10,84 GB ny rafitra amin'izao fotoana izao.
Afaka mahita fomba mora hitehirizana toerana fitahirizana amin'ny Mac ianao amin'ny fipihana HITANTAM- . Tsindrio ny bokotra eo ankavanan'ny tolo-kevitra ary jereo raha manampy anao hampihena ny fitehirizana rafitra ao amin'ny Mac ireo soso-kevitra ireo. Azonao atao ny manisy roa amin'ireo toro-hevitra ireo amin'ny tsindry iray monja!
maninona no manjavozavo ny fakantsariko
Fomba iray hafa hanafahana ny habaka amin'ny fitehirizam-bokin'ny Mac ny fananganana indray ny fanondroana Spotlight amin'ny Mac anao.Raha manana olana amin'ny fikarohana Spotlight ianao dia hanampy anao hamaha ny olana izany.
Tsindrio ny kisary Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery. Kitiho avy eo System Preferensi -> Spotlight . Farany, kitiho ny kiheba Tsiambaratelo
Tsindrio ny bokotra miampy (+) eo amin'ny zoro ambany ankavia eo am-baravarankely mba hanampiana ireo karazan-drakitra tianao hoheverina. Manoro hevitra anao aho hisafidy ny karazana rakitra rehetra raha toa ka manondro ny Spotlight voalohany ianao izao. Tsindrio eo Mifidiana eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny fikandrana rehefa avy nisafidy ireo rakitra tianao hanondro indray ianao.
ny fomba ahazoana miakatra ny iphone-ko
Kitiho ny X eo amin'ny zoro havia ambony mba hivoahana ny System Preferences. Ny fananganana indray ny fanondroana ny Spotlight dia hanomboka raha vao manidy ny System Prefers ianao. Zahao ny Lahatsoratra fanampiana Apple raha mila fanampiana bebe kokoa ianao amin'ny famerenana indray ny Spotlight amin'ny Mac.
Mbola mandray fitehirizana Mac be loatra ve ny rafitra?
Rehefa mitohy io olana io dia tsara ny mitady hoe inona marina no tafiditra ao amin'ny sokajy System amin'ny Mac-nao. Running Disk Inventory X dia afaka manao izany mihitsy! Ity utility ity dia mety download maimaim-poana ary hanome anao famakiana antsipiriany momba izay manangona toerana fitahirizana ao amin'ny Mac anao izy io.
ny fomba fanakanana ny nomeraoko amin'ny iphone 5
Aorian'ny fisintomana ny fampiasana dia sokafy izay nahita ary tsindrio fampidinana . Tsindrio indroa amin'ny Disk Inventory X 1.3 .
Tsindrio ny sary Disk Inventory X hanokafana ny fampiasa. Mety misakana anao tsy hanokatra ity fitaovana ity ny Mac-nao satria tsy azo hamarinina ilay mpamorona. Raha hitanao amin'ny Mac-nao ity fikandrana pop-up ity dia kitiho ny sary famantarana .
Kitiho avy eo Sokafy ho ahy ny tontonana ankapobeny.
Farany, kitiho eo Misokatra ihany hanome alalana ny Mac anao hitantana ny Disk Inventory X.
Rehefa nomenao alalana amin'ny Mac ianao dia sokafy ny Disk Inventory X. Kitiho RAFITRA hahitanao tsara izay maka ny fitehirizana rafitra ao amin'ny Mac anao.
Vantany vao hitanao ny rakitra sasany azo esorina, sokafy izay nahita ary tadiavo ny anaran'ireo rakitra tianao hamafa. Tariho amin'ny fako ireo rakitra mba hamafana azy ireo!
iphone mangataka Apple Id
Rafitra kely kokoa, habakabaka bebe kokoa
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hamaha ny olanao fitahirizana Mac. Nahita vahaolana hafa ve ianao momba an'io olana io? Avelao izahay haneho hevitra etsy ambany!